‘सन्जू’ बक्सअफिसमा एकपछि अर्को रेकर्ड ब्रेक गर्दै, परिवारमा भने तनाब ! – Everest Dainik – News from Nepal
‘सन्जू’ बक्सअफिसमा एकपछि अर्को रेकर्ड ब्रेक गर्दै, परिवारमा भने तनाब !
काठमाडाैं, असार २२ । बलिउड इन्डष्ट्रिमा यतिबेला चर्चाको शिखर छ संजय दत्तको वायोपिक ‘संन्जू’ । जसरी फिल्मले बक्सअफिसमा एकपछि अर्को रेकर्ड ब्रेक गर्दै अगाडि बढेको छ । त्यसैगरी संजय दत्त र फिल्मको बारेमा अरुले नभई परिवारबाटै आलोचना हुन थालेको छ ।
अभिनेता संजय दत्तको जीवनीमा आधारी फिल्मभरी कुनै पनि स्थानमा वा अवस्थामा श्रीमती रिचा शर्मा र जेठी छोरी त्रिशलाको नाम र भूमिका उल्लेख गरिएको छैन । जसले अहिले विस्तारै परिवारमा तनाब बढ्दै गइरहेको बताइएको छ ।
रणबीर कपूर अभिनित फिल्स सन्जूले अहिलेसम्म बक्सअफिसमा आफ्नो जादू कायम राखेको छ । संजयदत्तको जीवनीमा आधारित फिल्म हेरेर दर्शकले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो प्रशंसा गरिरहेका छन् । भने रणबीर कपूरको पनि व्यापक तारिफ भएको छ ।
तर संजय दत्तकी ठूली छोरी त्रिशला भने बुवाको फिल्मप्रति सन्तुष्ट नभएको खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् । त्रिशलाले अहिलसम्म सामाजिक सञ्जालमा फिल्म बारे कुनै प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् ।
संजय दत्तको जीवनीमा आधारित रहेर बलिउडका चर्चित निर्देशक राजकुमार हिरानीले बनाएको फिल्म जून २९ मा रीलिज भएपछि अहिले चर्चाको शिखरमा छ र बक्सअफिसमा धमाकेदार कमाइ पनि गरिरहेका छ ।
संजय दत्तकी जेठी छोरी जो सोशल मिडियामा निकै सक्रिय छन तर बाबाको फिल्मका बारेमा अहिलेसम्म कुनैपनि पोष्ट गरेकी छैनन् । उनको यो व्यवहार देखेर त्रिशला बुवाको बायोपिकप्रति खुशी नभएको शंका गरिएको छ ।
त्रिशलाको बुवा संजय दत्तसँग अति राम्रो सम्बन्ध छ । यसअधि उनले बुवाका सानासाना गतिबविधिको पनि सोशल मिडियामा जानकारी गराउथिन । सन्जू रिलिज हुँदा पनि त्रिशलाले यसप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएकी थिइनन् ।
सबैलाई जानकारी छ कि संजय दत्तको जीवनमा त्रिशलाकी आमा रिचा शर्मा को विशेष भूमिका छ । त्रिशलाकी आमा अर्थात रिचाको मृत्यु क्यान्सरका कारण भएको थियो । तर फिल्म सन्जूको कुनैपनि ठाउँमा रिचा शर्मा र त्रिशलाको नाम र भूमिका उल्लेख गरिएको छैन ।
सर्वाच्च अदालतद्वारा विषादीयुक्त खाद्यान्न बजारमा नल्याउन सरकारलाई आदेश